Afduub loo geystey gaari MSF Soomaaliya u kireysnaa oo geeri naxdin leh ay ka dhalatey - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Fiidnimadii hore ee 24kii Juunyo 2009ka oo maalintuna ay Arbaco ahayd, gaari gaar loo lahaa oo MSF u kireysnaa ayaa lagu weerarey Waqooyiga Gaalkacyo, ee Soomaaliya, isaga oo ka soo noqdey bukaan uu ka qaadey Xarun MSF oo ku taala Koonfurta Magaalada uuna geeyey isbitaal Waqooyiga ku yaal.
Intii dhacdadaasu dhacaysay, daryeelihii dumarka ahaa ee weheliyey bukaanka, ayaa la toogtay oo dhintay, dareewalkiina waa la dhaawacay. Qofkii sadexaad ee gaariga saarnaa oo shaqaale MSF ahaa dhib ma soo gaarin. Wadihii gaariga waa la daweeyey xaaladdiisuna waa ay wanaagsan tahay. Gaarigiina waxaa qaatay kuwii weeraray.
Weerarkaasu ma ahayn mid si toos ah MSF loola jeeday. Siday doonto ha ahaatee, waxay muujinaysaa leebal aan la aqbali Karin oo rabsho ah taas oo khatar galinaysa awoodii MSF ay ku siin lahayd daryeel caafimaad boqolaal kun oo Soomaali ah oo ku baahsan wadanka.
MSF waxa ay hawlaheeda ka bilowday Soomaaliya sanadkii 1991.laga soo bilaabo Jannaayo 2008, mashaariicda MSF ee ku baahsan Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya waa ay sii socdaan ayadoo ay sabab u tahay dadaalka, hawlkarnimada iyo geesinimada shaqaalaheenna Soomaalida ah ee u go’ay inay sii wadaan, oo ay taageeraan koox saldhiggoodu yahay Nayroobi kuwaas oo booqda mar kasta oo amnigu saamaxdo.
MSF waxa ay ka codsanaysaa dhammaan dadka dagaalaya in ay ixtiraamaan dhismayaasha/qalabka iyo hawlaha caafimaadka si markaa dadka iyaga oo aan loo eegeynin halka ay siyaasad, diin ama militeri ahaanba ay ku xiriiraan ay ku soo gaaraan daryeelka caafimaadka ee aadka loogu baahan yahay,.
Shaqada MSF ee Soomaaliya
MSF waxa ay ka shaqeyneysaa Soomaaliya in ka badan 17 sano waxaana ay daryeel caafimaad oo lacag la’aan ah ay maanta ku bixisaa siddeed gobol oo dalka ka mid ah; iyada oo ay mahaddeeda leeyihiin shaqaalaheenna dadaalka badan ee Soomaalida ah, oo ay taageeraan koox maareynta u qaabilsan oo xaruntoodu tahay Nayroobi. Sanadkii 2008dii oo keliya, ayaa kooxaha MSF waxa ay bixiyeen 727,428 oo la-talinta bukaan-socodka ah, oo ay ka mid yihiin 267,168 oo loo sameeyey carruur shan jir ka yar. In ka badan 55,000 oo haween ah ayaa heley la-talinta daryeelka ka horreeya dhalmada iyo in ka badan 24,000 oo qof oo bukaan-jiif ahaan loo dhigey cubitaallada iyo xarumaha caafimaadka ee ay MSF taageerto. Waxaa jirey 3,878 qalliin, oo 1,249 ka mid ahi ahaayeen dhaawacyo ka dhashey rabshad. Kooxaha caafimaadka ayaa daweeyey 1,036 qof oo qabey cudurka loo dhinto ee la dayacay ee kala azar, iyo in ka badan 4,000 oo laga daweeyey duumo (malariya) iyo 1,556 oo qof oo loo bilaabey daawada qaaxada. Ku dhowaad 35,000 oo qof oo la silcayey nafaqo-xumo ayaa la siiyey cunto iyo daryeel caafimaad waxaana la bixiyey tallaal gaaraya 82,174
Tags: afduub, bartamaha, dhismayaasha caafimaadka, dil, Gaalkacyo, waqooyi